‘घामड शेरे’ ले मल्टीप्लेक्सहरुमा कति पायो सोज ? « THULOPARDA.COM
‘घामड शेरे’ ले मल्टीप्लेक्सहरुमा कति पायो सोज ?
बलिउड सुपरस्टार अक्षय कुमार स्टारर चलचित्र ‘हाउसफुल ४’ का कारण मल्टीप्लेक्सहरुले अपेक्षाभन्दा कम सोज दिएपछि निर्माण टिमले कात्तिक ८ गतेबाट चलचित्र ‘घामड शेरे’ लाई दुई हप्ता पछाडि सार्‍यो । अब, यो चलचित्र यही शुक्रबारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । हेमराज विसी निर्देशित चलचित्रमा अभिनेता निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का प्रमुख भूमिकामा छन् ।
शुक्रबारका लागि नेपालका अधिकांश मल्टीप्लेक्सहरुले चलचित्रको बुकिङ बुधबारबाटै खुल्ला गरेका छन् । मल्टीप्लेक्समा चलचित्रले राम्रो सोज हात पारेको छ । कात्तिक ८ गतेका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टीप्लेक्स चेन क्यूएफएक्समा ‘घामड शेरे’ ले राजधानीको पाँच स्टेशनमा ६ सोज पाएको थियो । कात्तिक २२ गतेका लागि १७ सोज हात पारेको छ । त्यस्तै, उपत्यका बाहिरको ४ स्टेशनमा चलचित्रले १२ सोज पाएको छ ।
क्यूएफएक्स च्यानलमा मात्र २९ सोजमा प्रदर्शन आरम्भ गर्न लागेको यो चलचित्रलाई राजधानीको विग मुभिजले ५ सोज बाँड्दा क्यूज सिनेमाज्, सिडिसी सिनेमाज् र विएसआर सिनेमाज्ले समान्तर ३/३ सोज प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै, वान सिनेमाज् र एफक्यूब सिनेमाज्मा चलचित्रले ४ सोज हात पारेको छ । चलचित्र देशैभर ८५ बढी हलमा प्रदर्शन हुने बताइएको छ । मल्टीप्लेक्स सोज र हल संख्या हेर्दा चलचित्रको ओपनिङ आक्रामक हुने देखिन्छ ।
रिलिजपूर्व गीतसंगीतका कारण चलचित्रले राम्रो हाइप निर्माण गरेको छ, जसको फाइदा बक्सअफिसमा पर्नसक्छ । पहिलो पटक ‘रियल कपल’ निश्चल र स्वतिमाले अनस्क्रिन रोमान्स गरेका कारण पनि चलचित्रको इनिसियल व्यापार आक्रामक हुने चलचित्र पण्डितहरुको अनुमान छ । तर, प्रदर्शन मिति फेरबदल भएका कारण त्यसको असर बक्सअफिसमा पर्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
खोलालाई मुद्धा हाल्ने विषयमा केन्द्रिय ‘घामड शेरे’ मा निश्चल र स्वस्तिमा भेना र सालीको भूमिकामा छन् । चलचित्रमा निश्चलको श्रीमतीको भूमिकामा सुष्मा निरौला छिन् । गौरी मल्लको अतिथी भूमिका रहेको चलचित्रमा बादल भट्ट, लोकेन्द्र लेखक, सरोज अर्याललगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । नरेन्द्र मैनालीको छायांकन रहेको चलचित्रको कथा तथा पटकथा निर्देशक विसीले नै लेखेका हुन् ।
दुई दिनमा कति कमाए ‘सेन्टी भाइरस’ र ‘आमा’ ले ?
गएको असोज अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको दीपकराज गिरी समुहको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ पछि कुनै चलचित्रले